Atleet Maaree Dibaabaa fiigicha maaratoonii moo'atte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Home Atleet Maaree Dibaabaa fiigicha maaratoonii moo’atte
Akkuma atleetota keenya isaan biraa injifannoon alatti waan biraa kan hinbeekne atleet Maaree Dibaabaa woldorgommii atleetiksii Beejiingitti geggeeffamaa jiru irratti fiigicha maaratoonii injifachuudhaan shaampiyoonaa addunyaa taateerti. Maareen shaampiyoonaa addunyaa ta’uu kan dandeette fiigicha sa’aa 2:27,35 xumuruudhaan. Injifannoon Maareen galmeessiste rifaatuu maaratoonii dhiiraan moo’atamuun nurra gaye yeroofis ta’u akka dagatamu kan godhuudha.
Maaree Dibaabaatti aananii fiigicha kan xumuran atleetota Keeniyaati. Atleetonni Keeniyaa meetiifi nahaasa gargar qooddataniiru.
Previous articleTujjaarri Chaayinaa Waang Ji’aaliin guyyaa tokkotti biliyoona $3.6 kasaare
Next articleQaalawiinsa gatii hoteelaatiin Finfinneen Afrikaa keessatti sad. 1ffaa irratti argamti